Iingxaki ezi-5 eziqhelekileyo eziQala kwiSithuthuthu
Masithi uthathe amanyathelo okuqala , ufunde ukukhwela isithuthuthu , uthathe yonke imoto yokukhusela , kwaye mhlawumbi waqala ukuyothengisa ibhayisikili yakho yokuqala - yintoni elandelayo?
ISiseko soKhuseleko lweSithuthuthu sidibanisa uluhlu lweempazamo ezintlanu eziqalayo, kwaye sizihlanganisile apha. Ukufumana inyathelo elilodwa phambi kwekhalo, qaphela la macebiso ngokuchofoza 'Okulandelayo.'
Ukuthenga kakhulu iMoto
Ifoto © Boss Hoss
Izintlu zethu zeemoto ezisiqalayo , eziphakathi kunye nezihamba phambili ezihamba phambili zifana nento enye efanayo: zibonakala zincinci, zingenakuguquguquka ezincedisa i-buzz abatsha kwi-curve yokufunda.
Nangona ulingela ukuba uphume kwaye uthenge isithuthuthu esikhulu, esinamandla, uya kuba ngumgibeli ongcono ngokukhawuleza ngokuqala into encinci. Kwaye nokuba ukhangele i-cruiser okanye i-sportbike, amathuba anokuba nebhayisiki apho apho kunokukunceda ukwakha i-chops yakho ngokukhawuleza.
Ifoto © I-Digital Vision
Njengokuba uzama ukukhwela kuyo yonke indawo xa ufumene ilayisenisi yakho ye-motorcycle, khumbula ukuba yintlango ngaphandle kwayo: iindlela ezicelomngeni zinokuba neengozi ezininzi kunokuba usulungele ukujongana nazo, ithrafikhi enqabileyo yongeza unobungozi, kwaye iziphambano ezinobungozi zonke zandisa ingozi ebantwini abasha.
Thatha ixesha lakho ngokuthatha iindlela ezingaphantsi, kwaye uya kuba nokugxininisa ngakumbi kwezobugcisa bekhwele ngaphandle kokukhathazeka ngokuphepha izinto eziphazamisayo. Ungaxhalabi; Ukuba uhlala uphephile ngexesha lakho eliphambili kumava ebhayisiki, kuya kukunika ithemba xa ulungele ukuthatha kwiimeko ezinzima.
Ungagcinanga umfanekiso ocacileyo wezithuthi
Ifoto © Stockbyte
Kukho ngaphezulu ukukhwela kwendlela ngaphandle kokutshekisha amehlo akho ngaphambili. Ingaba loo moto iya ngakwesokunene sakho isingqineka kwindlela yakho? Ingaba imoto ebekwe ematyaleni inomntu oza kuguqula umnyango? Ingaba umntu osemva kwakho uyazi ukuba unciphazela ukukhanya okubomvu?
Kule minyaka yokuphazamiseka komqhubi, ukugcina umfanekiso we-traffic-around 360 kubaluleke kakhulu; xa usifikile kuloo nqanaba lokwazisa, into engalindelekanga ayisayiyothusa. Hlalani phezulu kwinqanaba lakho ngokuskena ngokucwangcisa phambili, ukujonga ngecala, uze uhlolisise izibuko zakho.
Akunakucinga ukuba awubonakali
Ifoto © Getty Images
Abagibeli abaye bahlala ixesha elide basoloko banikela icebo elifanayo leengcebiso kwizinto ezintsha: Cinga ukuba awubonakali.
Nangona kukho iindlela ezininzi zokuhlala zibonakala kwibhayisiki, kuya kunceda ukucinga ngabahamba ngeenqwelo-moya ezikujikelezayo njengokuba ungaboni ubuso bakho. Nangona ilungelo lakho lendlela, ungacingi ukuba imoto ayiyi kunqumla; nangona uye waqhagamshelana nomqhubi, musa ukubetha epulazini ukuba akayi kuhamba ngokukhawuleza okukubeka engozini. Kwaye ekugqibeleni, gcina iminwe phezu kwesibindi sakho sokuqhawula ngamaxesha onke xa kwenzeka ukuba uphephe ngokukhawuleza ukuphepha ukukhupha ... kwaye khumbula: kuphela i-paranoid iphile.
Ukuthatha Umgibeli okanye Ukuya kwiRide Ride ngaphambi kokuba Ulungele
Umgibeli ugibela ngesithuthuthu. Ifoto © Deborah Jaffe
I-Motorcycling inikezela ngengqondo ejulile yoluntu; emva koko, esinye sezizathu ezininzi esizigibelayo .
Njengokuba uzama njengoko ukuphonsa umhlobo emva kunye nentloko ezintabeni, ukukhwela nomgibeli kakhulu utshintshe ukuhamba kwebhayisikili yakho-kwaye, masijongane nayo, sinokukwazi ukunyamezela xa sizama ukumnceda umntu.
Ngokufanayo, ukukhwela kwiqela kubeka imingeni yazo; Akukuphela nje kuphela okufunekayo kwinqanaba elongeziweyo lokwaziswa kwendawo, kuninzi uxinzelelo lokukhwela ngokukhawuleza kunokuba unakho ukhululekile.
Sebenzisa ixesha lakho lokukhwela kwangaphambili, kwaye uya kulungelelanisa ngokuhamba kwakho kunye nendlela yokwenza izinto kumavili amabini. Kungekudala, uza kuba ulungele ukwabelana nabanye abantu.
Indlela yo-U-Yenza i-Motorcycle
Iindlela ezili-10 zokugwema ukubheka njenge-Squid
Indlela yokushiya iiGeyile zeGeyi
Indlela yokuhamba ngesithuthuthu ngeendlela ezili-10 ezilula
Indlela yokudweba iHelmet Helmet
Indlela Yokuzikhusela Kwimimandla Yokuhlaselwa Kweengqondo
I-Castleton Tower: Inqaba yaseMowabhi eLwandle oluLwazi
Imisebenzi emithathu engabonakaliyo yobuhlanga ngokumelene no-Obama
Ukuba Uthanda iLatin Christian Band Salvador, Kufuneka Uhlole iiBhanki
Ukufundisa okuyiNtloko: I-Backbone ye-ABA
U-Angelo Buono, uMnxeba we-Hillside
Iingcebiso malunga nokudweba komfanekiso
IiYunivesithi eziPhezulu eziPhambili eMelika
Ngaba Iinyama Zineenwele?
12 INdlu yeNdlu yeNgcaciso Ngaba awukwazi
Indlela yokulinganisa imida yeMimoya (kunye Nezithako Ekhishini Lakho)
Izisibhozo ezisetyenziswayo kulabo badala TY Beanie Babies
Iyini ingxelo yeJava?
IYunivesithi yaseTexas-iRio Grande Valley Admissions
Iimoto ezigqibeleleyo ezingaphantsi kwama-16,000 kwiiKholeji zabafundi
Ukukhunjulwa Kwezemikhosi Emihla Ehlabathini
Indlela yokwenza isepha
Indlela yokufaka isicelo sePasport yase-US